Mlm ပညာပေးဆောင်းပါးများ ~ Myanmar Anti Mlm Group
ဒေါ်လာပေါက်ဈေးနဲ့ လူတယောက်ကို ငွေ(၁၂၅၀၀၀)ထည့်ဝင်ထားရင် တနေ့ကို (၃၃၅၁.၆)ကျပ် အကျိုးအမြတ် ခံစားရတယ် ဆိုတာကြောင့် လူအများအပြား ငွေတွေ ထည့်ဝင် ရင်းနှီးနေကြတဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီတခု ပြည်မြို့မှာ ပေါ်ပေါက်နေ​ကြောင်းDVB ရဲ့ သတင်းတစ်​ခုပါ..
ကျွန်​​တော်​တို့ ရဲ့ မြို့​ရေကြည်​မှာလည်းအလားတူ
ကိစ္စ​တွေ ရှိ​နေ၊ရှိနိုင်​၊ ရှိလာ ခဲ့ ပါရင်​..
သတိထား သုံး သပ်​နိုင်​ကြ​စေရန်​...
MLM စနစ်​နဲ့ ပါတ်​သက်​ဆက်​နွယ်​​နေ​သောသိသင့်​သိထိုက်​တာများ..
သတင်း မီဒီယာများမှ ထောက်ပြဝေဖန်ထားသော
MLM ( Multi-level Marketing ) OR Network Marketing
( ဆင့်ပွား / ကွန်ရက် ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ) အကြောင်း စုစည်းမှု
( ဆောင်းပါးတွေ တင်မကပဲ အသံ နဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် တွေ ပါ ပါဝင်ပါတယ် ဗျာ )
ကျန်နေ လိုနေတာတွေ ၊ အသစ်ထွက်လာတာတွေကို ထပ်ပြီး ဖြည့်စွက်ပေးသွားပါ့မယ် ။
ကျန်နေ လိုနေတာတွေ တွေ့မိရင်လည်း တိုက်ရိုက်လင့်လေးပို့ပေးပြီး ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ ။
1. ဥပဒေအထက်က MLM ဈေးကွက်ဂယက် ပြည်သူတွေကို
( Eleven -ဖြိုးဝေ )
Financial Consultant - ဦးမျိုးမြဆွေထွန်း
AimStar - ကိုဂျိုးဇက်
Myanmar Journalist Network က ဦးဇေယျာလှိုင်
Enchanting Services Co.,Ltdက ဒါရိုက်တာတစ်ဦး
မူဝါဒဆိုင်ရာ စီးပွားရေးပညာရှင် ဒေါက်တာအောင်ကိုကို
မချယ် ( Q net - ၈ သိန်းခွဲ ဆုံးရှုံး )
(Q net - ၈ သိန်းခွဲ ဆုံးရှုံး+သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် )
Q Net Titan - ကိုရော်ဘင် ( MLM )
Q Net ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ တင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီ
မမွန် ( ဆုံးရှုံး )
Active English သင်တန်း - ဦးဇင်ဇေလွင်
ဦးသန်းအောင်ကျော် ( ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန် ကြားမှုဦးစီးဌာနက ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် )
ဦးသန်းစိုး(ဘောဂဗေဒ) ( လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး + စီးပွားရေးပညာရှင် )
2. Anti - MLM Campaign မှ ဦးဆောင်သူ ဦးဇင်ဇေလွင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
( Eleven- ဖြိုးဝေ )
3. Multi-level Marketing ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ
( The Voice - ဟိန်းမြတ်စိုး​၊​ အောင်သီဟ )
ဦးဇင်ဇေလွင် ( မြန်မာ့အိပ်မက် - လူငယ် တိုးတက်ရေး မဂ္ဂဇင်း တည်ထောင်သူ)
ဒေါ်ခင်လပြည့်ဝင်း (ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦး)
4. ဥပဒေ ပညာရှင် ဦး မင်းတေဇ ညွန့်တင် နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
(The Voice - ဟိန်းမြတ်စိုး )
5. ဆင့်ပွား အရောင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူ အော်တိုမိုဘိုင်းလ် ဂျာနယ်မှ
သတင်းထောက် ဦးကျော်ကျော်အောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
6. အောက်အဆင့်များအတွက် မွဲဆေး - မြစ်ပွားနာ စီးပွားရေး
မပိုပို ( Q net - ဆယ်သိန်း ဆုံးရှုံး )
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး FDA မှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးပြည့်ဖြိုး
AimStar - ဦးဂျိုးဇက်
ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာခင်လှိုင်ဦး
7. ဆင့်ပွားအရောင်းလုပ်ငန်းအပေါ် အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုမှုရေချိန် သိရန်လို
8. Multilevel marketing (MLM)မလုပ်ခင် ဒါအရင်ဖတ်ပါ
( Popular News Journal -မှူးအိမ်ဇော် )
MLM လေ့လာသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုဇင် ဇေလွင်
ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေခဲ့သူ ကို စိုးမိုးအောင်
နစ်နာခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်သော မလဲ့ယမုံ
ဥပဒေပညာရှင် ဦး မင်းတေဇညွန့်တင်
(7Days News - စီးပွားရေးသတင်းအဖွဲ့)
(7 Days News- ဖိုးစမ်းချောင်း (GG)
ပြည်သူ့အရေးအာရုံစိုက်ပါ ( အယ်ဒီတာ့ အာဘော် )
(7Days News-Editor )
ဆင့်ပွားဈေးရောင်းချခြင်းစနစ် (MLM)လုပ်ငန်းများ ထိရောက်စွာအရေးယူရန် တိုင်းလွှတ်တော်သို့တင်ပြ
(7Days News- ထက်အာကာကျော်၊ သက်အောင် )
(7Days News- ဂျေငြိမ်း )
မြန်မာပြည်သူများအတွက် မကုန်ဆုံးနိုင်သော သင်ခန်းစာ
(7Days News- အောင်သစ်လွင် , ဟိန်းသာ )
( DVB - ဒေါက်တာတင့်ဆွေ )
Multi Level Marketing စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို
ဥပဒေအရ ထိန်းချုပ်မှုတွေ ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့
စီးပွားရေးနဲ့ ဥပဒေအကြံပေး ပညာရှင်တဦးက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ( Video )
- ဥပဒေအကြံပေး ဦးမင်းတေဇ
မေးပါရစေဦး! " (LIVE) ( Video )
စနေနေ့ည အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့က " Multi-level Marketing-MLM (ခေါ်) ဆင့်ပွားရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကို
ဘာကြောင့် ဆန့်ကျင်သူတွေ များနေတာလဲ " ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုကောင်းမြတ်ထွဋ် (Director of Business Administration- Victoria University (Switzerland)၊
တက္ကသိုလ်အဆင့် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများတွင် စီးပွားရေးနှင့် ကွန်ပျူတာ ဘာသာရပ်များ သင်ကြားပို့ချနေသူ)နဲ့
ကိုဇင်ဇေ (MLM ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ ဦးဆောင်သူ၊ Active English သင်တန်းကျောင်းတည်ထောင်သူ) တို့က
Teen Radio မှ တိုက်ရိုက် အင်တာဗျူး ထုတ်လွှင့်သော MLM အကြောင်း
( ကိုဇင်ဇေ - Admin @ Anti-MLM Group ) Video interview - 1
( ကိုဇင်ဇေ - Admin @ Anti-MLM Group ) Video interview - 2
Audio interview ( 1 +2) ( အသံဖိုင် သီးသန့် ) ( ဗီဒီယိုထက် ပို၍ အသံကြည်လင်ပီသသည် )
P cloud - download link >>> https://my.pcloud.com/publink/show…
- MLM ( Multi-level Marketing ) ဆိုတာ ဘာလဲ ( ဖွင့်ဆိုချက် ၃ မျိုး )
- ကျွန်တော် ဘာကြောင့် MLM လုပ်ဖြစ်ခဲ့သလဲ ? ဘာကြောင့် ရပ်ပစ်ခဲ့သလဲ ?
- လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ MLM Companies တွေ ၊ စနစ်တွေ အကြောင်း
- ဘာကြောင့် Anti-MLM Campaign စလုပ်ဖြစ်ခဲ့သလဲ ? ဘာတွေ လုပ်နေလဲ ?
- MLM Companies တွေကြောင့် ဘယ်လို နစ်နာမှုတွေ ရှိနေလဲ ?
- အဲ့လို နစ်နာမှုတွေကို ဘယ်လို တားဆီးရမလဲ ?
Mlm စနစ်အကြောင်း / MLM ဆောင်းပါးများ / Time Ayar